Mananjary : ambany ny karaman’ny mpampianatra | NewsMada
Tany amin’ny distrikan’i Mananjary indray ny fampahalalana ny fiahiana ara-tsosialy eny amin’ny sekoly katolika (Dinec), miaraka amin’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana ara-tsosialy (Cnaps), ny herinandro lasa teo.
Toy ny toerana ambanivohitra rehetra, ambany ny karaman’ny mpampianatra sy ny mpanabe, ka sahirana ny talen-tsekoly amin’ny fanatanterahana ny fiahiana ara-tsosialy, nefa ts maintsy hajaina ny karama farany ambany (SME). Taorian’ny fifampidinihan’ny tompon’andraikitry ny Cnaps tamin’ireo talen-tsekoly, fantatra fa azo fenoina amin’ny fanomezana tombontsoa hafa, toy ny vokatra na fanomezana trano fonenana ny vola karaman’ny mpampianatra. Tsy maintsy aloa kosa ny latsakemboky ny mpiasa ahafahan’izy ireo misitraka ny zo ara-tsosialy. Nilaza Randriamanana Félicien, talen-tsekoly any Nosy Varika, fa tsy mbola nahazo volan-jaza izy, noho ny halaviran-tany sy ny antontan-taratasy fenoina.
Kely koa ny fanampiana avy amin’ny Cnaps, tsy mifanaraka amin’ny vidim-piainana ankehitriny (2.000 Ar ny volan-jaza, 5.000 Ar ho an’ny miteraka). Mitaky ny hamoahana ny lalàna vaovao mifehy ny satan’ny fiahiana ara-tsosialy, araka izany, Rabenandrasana Alfred, talen’ny Dinec.
Miisa 24 ny sekoly katolika any Mananjary ahitana mpampianatra sy mpanabe 290 ary mpianatra 7.800. Nilaza ny tompon’andraikitra avy amin’ny Cisco Mananjary, Rtoa Rakotonjanahary Onja Fitiavana fa maro ny sekoly tsy miankina miorina tsy ara-dalàna any an-toerana.